tsy misy voka-dratsy tsy misy voka-dratsiny China Manufacturer
Description:HFE Harmless Fanarenana vahaolana mazava tsara,Vahaolana amin'ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy antony,HFE Poisonless Solution Precision Parts
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny antonony > tsy misy voka-dratsy tsy misy voka-dratsiny
HFE tsy misy voka-dratsy tsy misy voka-dratsy
Ny vokatra dia tsy misy loko, mangarahara, tsy dia mahafa-po, tsy misy teboka ary tsy mora ny mandoro. Azo ampiasaina tsara amin'ny indostria izany.
Araka ny fitsipika OSHA, ny singa rehetra amin'ny vokatra dia tsy sokajiana ho toy ny zavatra mampidi-doza.
Ny singa rehetra amin'ny vokatra dia tsy voatanisa amin'ny karazana kansera avy amin'ny OSHA, IARC ary NTP.
5. Zava-mahadomelina mpanao sikidy tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy manelingelina;
Eco Friendly Cleaning Solutions dia mampiasa
This Spray Cleaner is a compound of Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Ity Hydrofluoroether Inert Clean Agent ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny fanamafisana ny mpanjifa, mora voatahiry ary
Vahaolana tsy misy loko sy tsy misy fanafody ho an'ny faritra vita amin'ny Precision Contact Now
tsy misy voka-dratsy tsy misy voka-dratsiny Contact Now
HFE Harmless Fanarenana vahaolana mazava tsara Vahaolana amin'ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy antony HFE Poisonless Solution Precision Parts